गरिबलाई दशैंमा दसा छोरी भन्छिन् ‘बुवालाई बचाउन म आफुलाई बेच्न पनि तयार छु’…हेर्नुहोस् । (भिडियो सहित) – yuwa Awaj
कार्तिक १२, २०७७ बुधबार 2
सन्तानका लागि सबै’भन्दा ठूलो सहारा अभि’भावक हुन् । तर जब आफ्ना बुवाको अन्ति’म अवस्था आउँछ सन्तान’का लागि त्यो भन्दा ठूलो पी डा केही पनि होइन । कमा’नसिंह विकको अहिले बाँकेको कोह’लपुर स्थित नेपा’लगन्ज मेडिकल कलेजमा उप’चार भइरहेको छ ।
तीन वहिनी दिदी बहिनी र एक छोराका बुवा समेत रहेका कमा’नसिंहको एउटा खुट्टा नै छैन । को’हलपुर स्थित अस्प’तालले उनको उपचारका लागि भार’तको लखनउ रेफर गरेको छ । तर उप’चारका लािग उनीहरुसंग पैसा छैन । उपचारका लागि करिब ६ लाख रुपै’या खर्च हुने चिकित्स’कले बताएका छन् ।
तर उपचार गर्न पैसा नभ’एका कारण उनलाई लखनउ ल’गिएको छैन । दागंको तुलसी’पुरका स्थानिय उनलाई कसैले प्र हार गरेर घा’इेत ब’नाएका हुन् । उनी दशैंको बेलामा कतै बा’हिरवाट घर फर्कदै थिए त्यती नै बेला उनलाई कसैले आक्र’मण गरेको थियो । उनको हात र खुट्टा’मा चोट लागेको छ ।
उनी भान्जा’को विवाह भोज खाएर घर फर्कदै थिए । साँझ करिब ८ वजे तिर उनी मा’थि यस्तो घटना भएको हो । बुवाको अ’न्तिम अवस्था’मा देखेर उनकी १७ वर्षकी छोरीले रुँदै आफ्नो बुवालाई उप’चारका लागि सह’योग गर्न अपिल गरेकी छन् । उनले बुवा नै आफुहरुको सहारा भएकाले उनलाई बचाउन आफु’लाई बेच्न पनि तयार छु भन्दै छोरीले रुँदै बिलौ’ना गरेकी छन् ।
आर्थिक अ’वस्था निकै कमजोर रहेका कमान’सिंहको परिवारमा अहिले वज्र’पात परेको छ । छोरीले भनिन्, मेरो बुवालाई बचाइदिनुस्, बुवालाई बचाउन म आफु’लाई बेच्न पनि तयार छु । घ’टना कसले ग’रायो भन्ने उनीहरुले थाहा पाएका छैनन् । घटनावारे प्रह’रीमा जानकारी भएको भएपनि अहि’ले सम्म घट’नाको वास्तवि’कता खुलेको छैन । -इताजा खबर बाट
Prevसियोनको लागि पौल शाहले गरे दशैंको टीकाको दिन दशैं दक्षिणा स्वरुप एक लाख सहयोग… हेर्नुहोस्।
Nextदसैँ मनाउनेहरु कम्युनिष्ट हैनन्- नेकपा नेता गजुरेल !
बधाई ! नेपाली चेलि अस्मिताले पाइन स्वीजरल्यान्डमा दुई करोड बराबरको छात्रवृत्ति…हेर्नुहोस् ।
हार्दिक बधाई ! अनलाईन करातेमा रविन्द्र मानन्धरले नेपालका लागि स्वर्ण हात पारे…हेर्नुहोस् ।